Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Otu onye n'ime ndị Britain ise jụrụ ndụmọdụ megide njem mba ofesi
Ọtụtụ ndị mmadụ si London ezumike mba ofesi n'ime ọnwa iri na abụọ gara aga karịa mpaghara UK ọ bụla, ebe 12% na-ekwu na ha ewerela ezumike esenidụt nke ụbọchị asaa ma ọ bụ karịa na naanị 41% na-ekwu na ha enweghị ezumike ma ọlị.
Otu onye n'ime mmadụ ise wepụrụ nchegbu banyere Covid - ma gbaghaa ịdọ aka ná ntị ugboro ugboro sitere n'aka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị ọkachamara ka ha nọrọ n'ụlọ - iji mee ezumike esenidụt n'afọ gara aga, na-ekpughe nyocha wepụtara taa (Monday 1 Nọvemba) site na WTM London.
Nsonaazụ sitere na mkpesa Industrylọ Ọrụ WTM, nke gbara ajụjụ ọnụ 1,000 UK, kpughere 21% nke ndị Briten mere ezumike ụbọchị asaa ma ọ bụ karịa n'ime ọnwa 12 ruo Ọgọst 2021, yana 4% nke ndị nwere njem mba ofesi na ọnụnọ.
29% ọzọ were naanị ọnụnọ, ebe 51% agaghị ezumike ma ọlị n'afọ gara aga, na-ekpughe akụkọ ewepụtara na WTM London.
Ndị gbagara mba ofesi maka ezumike ụbọchị asaa ma ọ bụ karịa mere ya n'agbanyeghị arịrịọ ndị ozi gọọmentị na ndị ndụmọdụ ahụike ka ha ghara ime njem, n'agbanyeghị egwu Covid nwere ike gbasaa n'ihu.
N'oge dị iche iche n'ime ọnwa 18 gara aga, njem ma n'ime na site na UK akwụsịla n'ihi Covid, gụnyere n'ime ọtụtụ ọnwa atọ mbụ nke 2021, mgbe njem mba ofesi megidere iwu.
Ọbụna mgbe njem mba ofesi bụ ikike, ndị ozi gọọmentị na ndị ọkachamara ahụike gbara ndị mmadụ ume ugboro ugboro ka ha hapụ ezumike mba ofesi kwa afọ iji nyere aka ịnwe Covid.
Na June 2020, onye bụbu Mịnịsta ahụike Helen Whately gwara ndị Britain na ha kwesịrị 'ilezi anya nke ọma' tupu ha etinye akwụkwọ ezumike mba ofesi; na Jenụwarị 2021, onye bụbu onye odeakwụkwọ ahụike Matt Hancock dụrụ ndị mmadụ ọdụ ka ha mee atụmatụ maka “oké ọkọchị Britain” na onye odeakwụkwọ mba ofesi Dominic Raab kwuru na ọ bụ “oke n'oge” maka ndị Briten ide akwụkwọ ezumike ezumike na mba ofesi. Onye bụbu odeakwụkwọ gburugburu ebe obibi George Eustice kwusiri ike ugboro ugboro na ya enweghị “ebumnobi ịga njem ma ọ bụ gaa ezumike mba ofesi”, ebe Prime Minista Boris Johnson kwuru na May na ndị ezumike Britain ekwesịghị ịga mba ndị na-edebanye aha ma e wezụga n'ọnọdụ "oke".
Nsogbu na ọnụ ahịa nke ule Covid, yana mgbagwoju anya maka sistemụ ọkụ okporo ụzọ - ọ bụghịkwa ihe ize ndụ nke mgbanwe oge ikpeazụ nke hụrụ na ndị na-eme ezumike na-agbada n'ụlọ UK iji zere ịpụ iche - n'ụzọ doro anya ewepụghị ndị na-achọ ezumike esenidụt. .
Ndị o yikarịrị ka ha ga-eme ezumike esenidụt sitere na North East, ebe 63% nke ndị si mpaghara a na-ekwu na ha enweghị ezumike ma ọlị, naanị 13% na-ekwu na ha ga-eme ezumike esenidụt yana 25% na-ekwu na ha d were a staycation.
Onye isi ihe ngosi WTM London Simon Press kwuru, sị: "Nsonaazụ na-ekwu maka onwe ha - ọtụtụ ndị Briten na-ahụ ezumike oge okpomọkụ nke mba ofesi dị ka ihe dị mkpa, ọ bụghị ihe okomoko, na ole na ole dị njikere ịhapụ ụbọchị asaa ma ọ bụ 14 ha n'ime anyanwụ n'ihi na anyanwụ. ọnwa 12 gara aga n'ihi nchegbu gbasara Covid.
"Nke ahụ bụ n'agbanyeghị ị ga-anwale ule Covid dị oke ọnụ, n'ihe ize ndụ mgbanwe ọkụ okporo ụzọ wee megide ọtụtụ ndụmọdụ sitere n'aka ndị isi ka ha nọrọ n'ụlọ."